Atlas Copcoconsolidates Chinese izimayini - China Tianjin Longtop Izimayini
Inkampani uthe lo mnyakazo kuzokhulisa kahle futhi uqinise inkampani lekusasa.
Atlas Copco kuzovala luhlobo yayo Shenyang, ekhiqiza ikakhulukazi ngesandla idwala sokuzivivinya ngoba ezimayini nasembonini yokwakha, washintsha imisebenzi esitshalweni e Zhangjiakou. Ngo Shenyang, abantu abangaba ngu-225 ziyokhinyabezeka.
Ngo Zhangjiakou, Atlas Copco okwamanje ukhiqiza phansi-the-imbobo imishini esetshenziswa sokuprakthiza blastholes, imithombo yamanzi kanye izicelo geothermal amandla. Kulesi indawo, abasebenzi mayelana 45 niyozenezelelwa futhi utshalomali olwenziwe isikhungo ukuwathuthukisa imishini emisha.
"Kufanele umkhiqizo iphothifoliyo enkulu eChina, kodwa funa ababuthakathaka emakethe izimayini kumelwe siqinisekise ukuthi sisebenzise amandla ethu ngendlela eyiyo," kusho uJohan Halling, umongameli ngokuba Imayini Rock kuvubukulwa Technique ibhizinisi endaweni.
"Ukuhlanganisa imisebenzi kuyosisiza sihlale siqinile lekusasa. Sitawesekela abasebenzi abathintekayo kulesi simo esinzima. "
Bobabili imisebenzi ngokuyinhloko ukukhonza emakethe Chinese yasekhaya.